Michel Obama oo booqanaysa dalka Koonfur Africa　– SBC
Michel Obama oo booqanaysa dalka Koonfur Africa
Johannesburg:- Marwada koowaad ee dalka mareykanka Michel Obama ayaa booqasho rasmi ah ku maraysa dalka koonfur Africa taasi oo ah booqashadii labaad ay dibadda ugu baxdo iyadoo aanan la socon Odaygeeda Brack Obama.
Diyaaraddii ay la socotay Michel Obama ayaa soo caga dhigatay airport milatari oo ku yaala magaalada Pretoria ka hor inta aysan u dhaqaaqin Johannesburg iyo Cape town iyadoo sidoo kalana booqan doonta dalka Botswana ee deriska la ah iyadoo ay la socdaan hooyadeed iyo labadeeda gabdhood Saasha iyo Maaliya.
Socdaalka Michel Obama ee south Africa ayaa lagu sheegay in uu salk ku hayo xoojinta siyaasadda dowladda mareykanka ee arrimaha waxbarashada caafimaadka iyo dimuqaraadiyadda.
Michel ayaa la filayaa in ay kulamo la yeelato Garassa oo ah xaaska madaxweynihii hore ee dalka koonfur Africa Nelson Mandela , sidoo kalana waxa ay booqan doontaa Jasiiradii uu ku xirnaa Mandela xilligii midab kala sooca .
Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in booqashada Michel Obama ay ku soo beegmayso xilli dalka mareykanka looga diyaar garowobayo doorashooyinka madaxtinimo ee sanadda 2012, taasi oo Odaygeeda isu diyaarinayo in markale loo caleemo saaro madaxtinimada mareykanka , si muuqaalka Obama looga arko qaaradda Africa dhexdeeda oo ay ka soo jeedaan madowga mareykanka islamarkaana codkooda ay ku biiriyaan Obama oo isna asal ahaan ka soo jeeda qaaradda Africa.
Mas’uuliyiin katirsan aqalka cad ee mareykanka ayaa ku tilmaamay booqashada Michel Obama ee qaaradda Africa in ay tahay mid Obama uu ku xoojinayo siyaasadiisa dibadda maadaama Michel Obama ay la kulmi doonto mas’uuliyiin katirsan maamulka madaxweyne Jo Kob Zuma iyo mas’uuliyiin ka socota ururada dhalinyarada iyo haweenka dalka South Africa.